Ithegi: inethiwekhi edibeneyo | Martech Zone
Maka: inethiwekhi edibeneyo
Imithombo yeendaba yezeNtlalontle iLawula amapolisa kwakhona
NgoLwesibini, Januwari 8, 2013 NgoLwesibini, Januwari 8, 2013 Douglas Karr
Okwangoku abantu bebendazi, bendihlambalaza ngokuchasene nemithetho yamapolisa kwimidiya yoluntu. Bandiqhuba ngenene. Kwiminyaka elishumi, enye yeempikiswano eziqhubeka nokubonakala kukuba unganxibelelana nabantu ongabaziyo kwi-intanethi. Iphinde yavela izolo xa ndabelana ngesithuba sikaDan Schawbel, Kutheni Ndamkela Zonke iZicelo zonxibelelwano eziQhagamshelwe. UDan udwelise izizathu ezi-5 zokuba kutheni enxibelelana nabantu ongabaziyo, kubandakanya
I-LinkedIn inamalungu angaphezu kwezigidi ezili-135 kumazwe aphesheya kwaye umvuzo ophakathi womsebenzisi we-LinkedIn ungaphezulu kwe- $ 100,000 ngonyaka! Into yokuqala endiyibuyayo kuhambo lweshishini okanye intlanganiso kukufaka bonke abafowunelwa kum kwi-LinkedIn, ndiphonononge iiprofayili zabo, kwaye ndibone ukuba zeziphi endimele ndizilandele. Ngapha koko, andamkeli kwaqala kwakhona… ukuba awunayo iprofayile ebanzi ye-LinkedIn, sisimangalo sokuqala esichasene nawe. I-LinkedIn yile
NgoLwesithathu, Oktobha 10, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Bukela ividiyo. Kuya kufuneka umthande uMarkku, ngakumbi umzamo wokuphosa isitayile sediski! Enkosi kuPhil Schwarzmann kwaNokia ngokundazisa ngevidiyo yabo yentsholongwane!